Agaasimaha CIA-da dalka Mareykanku waa ogyahay khatarta la kulanka Kuuriyada Waqooyi – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 12/12/2018 ] Men accused in mosque attack face federal trial in Minnesota	English News
[ 12/12/2018 ] Canadian ex-diplomat detained in China, official confirms	English News
[ 12/12/2018 ] Pomp, colour as Somali cultural festival closes	English News
[ 12/12/2018 ] Ra’iisul Wasaaraha UK oo wajaheysa olole codka kalsoonida loogala laabanayo	Arimaha Bulshada
[ 12/12/2018 ] Dowladda Soomaaliya oo ruqsad Kalluumeysi ah siisay Shirkad laga leeyahay Shiinaha	Arimaha Bulshada
HomeWararka SoomaaliaAgaasimaha CIA-da dalka Mareykanku waa ogyahay khatarta la kulanka Kuuriyada Waqooyi
Agaasimaha CIA-da dalka Mareykanku waa ogyahay khatarta la kulanka Kuuriyada Waqooyi
12/03/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Mar 12, 2018:- Agaasimaha CIA-da Maraykanka Mike Pompeo ayaa difaacay go’aanka madaxweyne Donald Trump ee ah in uu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu ka warhayo khatarta.
Trump “uma samaynayo arrintaan riwaayad ahaan, wuxuu halkaas u tagayaa inuu xalliyo dhibaato” madaxa sirdoonka ayaa sidaas sheegay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in kulanku uu dhalin karo “heshiiskii ugu weynaa ee caalamka”
Balse waxaa laga digay in haddii wadahadalladu u qabsoomaan si aan wanaagsnayn ay taasi sababi karto in ay uga sii darto xiriirka labada dal sidii uu markii hore ahaa.
Weli ma dhicin in madaxweyne Mareykan ah uu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Trump ayaa lagu warramayaa in uu si deg ddeg ah u aqbalay codsiga markii ay u soo gudbiyeen ergada ka socotay Kuuriyada Koofureed Khamiistii, go’aankiisa gaarka ah ee uu qaatay ayaa noqday mid la yaab leh.
Wada xaajoodyo hub ka dhigis ah oo la isku dayey ayaa fashil ku dhammaanayay tan iyo sanadkii 2003.
DAAWO SAWIRO:- Madaxweyne Waare oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wafdi Uu Hogaaminayo Wasiirka Howlaha Guud ee dowlada Soomaaliya oo Jowhar soo Gaaray.
Diyaarad dalka Turkiga laga leeyahay oo ku burburtay buuralleyda Iiraan